Halloween - ebusuku epheleleyo iidemon | Apg29
Facts about Halloween. Halloween nto ngaphezu isithethe endala lobuhedeni ukuba akukho mntu kufuneka benze lo, unguyena mncinanana kubo bonke ngumKristu. Ukufa nobubi uyazukiswa.
Kule 1840s, wathabatha becala Irish naye lo mbhiyozo Celtic xa bafudukela eMelika. E Melika, iye yaba isidlo esikhulu, phakathi kwamaKristu yaye ibhiyozelwa ngo-Oktobha 31. Ukusuka Melika, iye "Americanized" iminyaka ethile, wabuyela eYurophu with "Skulls" usikrobana ngamathanga, igqwirha-amisiweyo, iimaski embi kangaka, ensimbi, neefolokhwe uMtyholi kunye amangcwaba ngeplastiki okanye umthi.
"Ngoko ke ukuba bangathini na ukumbulala, umakhulu, uyise, abantwana, abahlobo ngabe unjani xa bathe babuya kwabafileyo njengeziporho, amathambo kunye needemon!"
Halloween a pre-lamaKristu ngumkhuba zobuhedeni ethe ludalwe zinguquko phakathi Celtic liqela abantu. Ezi ekuqaleni evela Asia Minor, nokuba kwelaseGalati (Turkey yanamhlanje).
Celtic ayavela kwimbali yaseYurophu, ixesha lokuqala emhlabeni 500 BC, xa emva nokuya wayehlala inxalenye ngoko kumantla Europe; indawo engqonge iDanube nasentshona eJamani. EYurophu, baya ngegama "gaeler" okanye "igridi".
Ngexesha ukwanda enogonyamelo kumaCelts yandisa kwindawo yabo, ngasentshonalanga ukuya Belgium ingakumbi eBritani, ingakumbi Ireland, ezantsi Italy kunye Spain nangasempumalanga Asia Minor, apho kwakhona bahlala aseGalati.
"Galates" Kananjalo ke igama lesiGrike Celtic. weza ngcembe eScotland, Wales Ireland ingakumbi, ukuba ithathwe kwikhaya Celtic. iminyhadala yenkolo Celtic, nobomi jikelele, wasiwa nge nokukhafula kunye nokusetyenziswa ngamandla druids (umbingeleli-ookumkani). umbingelelo isiko izityalo, ngokufuthi beautiful kunye nokutya okuphekiweyo, isonka ngovuyo, kwakukho izinto ezifanayo, kodwa imibingelelo zabantu yenzekile (jonga Lindow Man e Manchester, ogama amathambo yabhaqwa ngo-1984).
Ubomi nokufa uthixo Samhain
Stonehenge e England igqalwa phakathi abafuna mihla kwi "keltism", ungumqokeleli ngempumelelo kakhulu amandla omlingo. Oku kulapho amagqwirha lanamhlanje kunye iishaman ukuba nemimoya kunye nemibhiyozo lokuhlambulula. Celtic yabhiyozela umthendeleko lokuvuna kunye New Year nge-1 Novemba. Yayiyimini engcwele yobuhedeni. Itheko kwaphawula ukuphela kwehlobo kwaye ngaloo ndlela ukufa ekwindla ungeno mnyama kwindalo, nto leyo ithetha ukuba isiqalo esitsha ukuphila ngokwako. Emhlabeni, emagqabini ewile, intshule Iibhalbhu ezintsha.
Ngeli xesha lonyaka kwakuthetha kwakhona, ukuba komkhusane phakathi kwabantu abahlala kulo ihlabathi yaye ihlabathi kwabafileyo (phakathi incarnations) kwaba thinnest. Ngokuhlwa ngaphambi New Year, le "ngokuhlwa engcwele", i "iHallow uEva", okt Oktobha 31, xa ke ingcamango yokuba abafileyo, ubuncinane abo bafayo kulo nyaka udlulileyo, kunye nabanye, zombini amandla okulungileyo nokubi noomoya - wabuyela emhlabeni phantsi kolawulo ubomi uthixo nokufa (izithunzi ezikhanyayo nezimnyama) Samhain. Ke walawula kokubini endaweni yonke kunye kwelabafileyo.
Ngomhla wama-31 Oktobha Ngoko ke bobabini eento zonke eziphilileyo; ngokuhlwa efile. Libizwa ngokuba "izinyanya Night," "Anfädernas Night" okanye "ubusuku izinyanya '".
Intlanganiso kunye umlingo amhlophe namnyama
Xa amandla abafileyo, kunye nezinye kunye oomoya, weza Earth le ngokuhlwa, kwafuneka, kwelinye icala, abasa amakhandlela kunye nemicimbi eyayenzelwa ngenxa yokulungileyo benza kwiindawo apho esamkela, ukuchonga nabo, Mandibucamagushe ubuso nabo ukuba ukufana nabo, yaye kwelinye ukudida ezizingelayo lukoyikise kubo kwaoko, khangela kunabo ugcine cool indlu.
UkuKhanya, umlilo, igazi, iisimboli zokufa nobumnyama zaye oxutywe. White kunye komlingo kwafikelelwa kuzo, kunye ngohlangothi ukuthakatha. Druids yalikhanyisa eyayenzelwa ezinkulu ukoyikisa izidalwa eziyingozi amagqwirha imbi ephaphazela. Abantu bacelwa ukuba kucinywa indlu kaThixo umlilo kwaye endaweni download umlilo entsha Druids imililo ukuze bazikhusele.
Abo bafika kwihlabathi lomoya, ngaba bobabini ukunika izipho loNyaka oMtsha, umzekelo, idinga ukubuya ukukhanya emva kokuwa kunye ebusika kunye nokuchuma entle kunyaka ozayo - okanye ukhuphele imiphefumlo yabo bafa le ngokuhlwa / ebusuku, makakubuze imibingelelo zabantu ukuba kunyaka omtsha. Yayimalunga izibonelelo okanye iziqalekiso.
Nantsi sisiseko imiba abanye abantwana owayephila ngelo emnyango ebusuku phambi All Saints Day: "Candy okanye ibhasi", "trick-okanye-aphathe" ( "Spratt okanye isipho"). Samhain ke batshelwa ophayo nomvuni engancumisiyo. Ngoko ke kulindeleke ukuba ukuhlonipha. ngomkhosi Christian Church ngayo All Day Saints, kwavela Sizingce phezu wobuhedeni Celtic kokuvuna emthendelekweni.
Kwaye isithethe lamaKristu Irish okuqala ukuba bakhalela isonka izindlu, nokuba imbuyekezo, uthandazele imiphefumlo izihlobo kwabafileyo. Ekugqibeleni kwabakho isiphithiphithi, mhlawumbi impendulo bomlingo "förkristnandet" - Ashera nokuba yobuhedeni ezingcwele neendawo eziphakamileyo anqunyulwa phantsi kwaye endaweni iicawa zamaKristu kunye namangcwaba - ukuze "bonke abaphilileyo nabafileyo ubusuku," ingcinga zobuhedeni, yaba, ezinye phezulu hambisa "Allahelgonaafton", ngamanye amazwi Halloween.
Kule 1840s, wathabatha becala Irish naye lo mbhiyozo Celtic xa bafudukela eMelika. E Melika, iye yaba isidlo esikhulu, phakathi kwamaKristu yaye ibhiyozelwa ngo-Oktobha 31. Ukusuka Melika, iye "Americanized" iminyaka ethile, wabuyela eYurophu with "Skulls" usikrobana ngamathanga *, igqwirha-amisiweyo, iimaski embi kangaka, ensimbi, neefolokhwe uMtyholi kunye amangcwaba ngeplastiki okanye umthi.
Ezinye data icebisa ukuba inkampani kunye iziqhulo njengoko 1991 kwaqalisa sungula ku eSweden. A flaya evela kwitsheyini lokutya kwiminyaka embalwa eyadlulayo: "Ngoko ke kuqokelela spökkompisar kwaye umtyholi abahlobo bakho a real Halloween iqela kwaye ulungele ubusuku ngokupheleleyo iidemon."
Ngoko ke, ukuba bangathini na ukumbulala, umakhulu, uyise, abantwana, abahlobo ngabe unjani xa bathe babuya kwabafileyo njengeziporho, amathambo needemon! Kutheni ayilime awusebenzi ngoko ngakumbi njenge ebizwa ngokuba yi-imimoya elungileyo "neengelosi" kwi kwimimoya engendawo, ukuba ufuna kubadlali izihlobo zabo kunye nabahlobo abafa - yaye ngoku kuthetha uya umva?
Ngokucacileyo Halloween celebration for balwa abaninzi nje umdlalo elimsulwa, ngaphandle wacinga ukuba kungaba into ngasemva. Kodwa kutheni ukuba mnyama kwaye bengazimisele luqaqanjisiwe? Ingaba soyikiso ment ixhala azalwa?
Uyadlala indoda ekufeni ukuze ufumane kude uxanduva phambi sekufeni? Halloween kufuneka lubonwe yokubaleka kuyimfuneko okuyo? Ewe, Halloween nto ngaphezu isithethe lobuhedeni endala ukuba akukho mntu kufuneka benze lo, unguyena mncinanana kubo bonke ngumKristu. Ukufa nobubi uyazukiswa.
Esikolweni, abantwana bafunda ukuba ayeke ugonyamelo. Yaye ithetha kakhulu malunga ekukhuseleni abantwana, kuqala cinga iimfuno zabantwana osenyongweni. Le nangentando igama inkululeko kuqhutywa ngaxeshanye aba oonyana neesimboli yokufa kunye nobundlobongela ezikolweni, kwabeendaba kunye noluntu ngokubanzi. imigangatho kabini kunye naivety, ndithi! Indlela enkulu imfuneko yethu kunokuba apha eSweden ngexesha ekwindla elide kwaye kumnyama neqela, Halloween ngumzekelo omhle!
Nceda uphawule, njengomKristu, kwihlabathi lomoya kunye kwimpikiswano kawonke kwi lo mntwana-abanabuhlobo ngokuhlwa yobuhedeni. Kodwa Phendula zidlala abantwana costumed kumKristu ngobulumko. Yithini, umzekelo, ngobubele, ukuba musa Halloween. Nzima kunokuba ngokuqhelekileyo ayilungelelani kubakho. Ukuzama ukuba "ngamaKholwa" Halloween, ndithetha Kwelinye icala, indlela engalunganga ukuya.
* Ngokutsho ilivo Irish, kwakukho izinto zentsimbi abangendawo ogama uJack. Jack ngobuqili uMtyholi waza wamenza ndiyathembisa singaze ibango umphefumlo wakhe. Xa ekugqibeleni wafa, yena walelwa yokungena ezulwini ngenxa yokuba wenza kangangokuba emhlabeni. Ke ndibe angazibona kunye uMtyholi, wahlala umphefumlo ebhadula emhlabeni. Wacela uMtyholi ukuba ubuncinane afumane lantern. UMtyholi la xa umlilo encinane umnqathe ngentende Jack wadla. Ukususela ngoko ke walahleka macala Ndigungqagungqiswa with "lantern 'yakhe ifuna indawo yokuhlala. Xa imidlalo emveli wabiza omnye isibane esinjalo "Jack-o-lantern", ingakumbi sasijonge uzokoyikisa noomoya ububi.